Xildhibanada Maamulka Galmudug oo loodiiday kaararka aqoonsiga . – Kismaayo24 News Agency
by admin 16th January 2020 0131
Xildhibaano ka tirsan baarlamanka labaad ee Galmudug ayaa sheegay in xubno ka mid ah xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay diideen in ay bixiyaan karaka Aqoonsiga, islamarkaana lagu xujeeyey inay u codeeyaan mid ka mid ah musharaxiinta guddoonka baarlamanka si karaka loo siiyo.
Xildhibaanada ayaa sheegay in hadda aysan heysan wax aqoonsi oo caddeynaya in ay yihiin xildhibaano, si ay u codeeyaan.
Xeeladdan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay tahay mid la doonayo in lagu xaqiijiyo inaysan codeyn xildhibaanada aan taageeresaneyn musharaxa dowladda ee Dr. Maxamed Gacal.
Walaac badan ayaa laga muujiyay sida lagu kala aqoonsan doono xildhibaanada iyo dadka caadiga ah xilliga doorashadda guddoonka baarlamaanka, waxaana suurta-gal ah inay codeeyaan dad aan xildhibaano ahayn.
Dhinaca kale, wasiiru dowlahii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Wehliye Faarax, oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha, ayaa sheegay in xubno ka mid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ay handaad ku hayaan xildhibaanada Galmudug ee dhawaan lasoo dhisay.
Cabdullaahi ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dhibaato badan ku heyso degaanada Galmudug, islamarkaana haddii aan wax laga qaban dhibaatooyin badan ay ka dhalan doonaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa awood ciidan iyo mid dhaqaale ku bixineysa sidii Galmudug madax looga dhigi lahaa shaqsiyaad ay wadato oo aan ku iman rabitaanka dadka deegaanka.
Dalalka Shiinaha iyo Mareykanka oo maaanta kala saxiixday.
Dhagayso:- Isbitaalka Guriceel oo la ciirciirayo daweynta Dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii Xadka somaliya iyo Ethopia
admin 30th May 2015 27th August 2015
MICHAEL KEATING oo shaaciyay Xog la qariyay iyo doorashada oo dib udhaceysa…
Tifaftiraha K24 10th September 2016